विश्वकै अग्लो कुकुर, वर्षमा खान्छ १६ लाखको खान्की ! – Deshko News
Home » विचित्र दुंनिया » विश्वकै अग्लो कुकुर, वर्षमा खान्छ १६ लाखको खान्की !
विश्वकै अग्लो कुकुर, वर्षमा खान्छ १६ लाखको खान्की !
इंग्ल्यान्ड, कार्तिक १५
मोडल क्लेरीका अनुसार फ्रेडीले आमकुकुरकोभन्दा कैयौँ गुणा धेरै खान्छ । उसले पिनट बटरदेखि कैयौँ कुखुरा एकसाथ खान्छ । घरका सदस्यमध्ये सबैभन्दा धेरै खान्की नै उसैलाई चाहिन्छ । फ्रेडीले वार्षिक १५ हजार पाँच सय ३५ डलर अर्थात् करिब १६ लाख रुपैयाँको खाना खान्छ ।-एजेन‍्सी